Olympic bound Tawengwa goes mountainous - The Zimbabwean
Olympic bound Tawengwa goes mountainous
One of Zimbabwe’s representatives at the 2012 London Olympic Games Sharon Tawengwa is in Kenya where she is training in the mountains which have produced world champions.
Tawengwa, who has been picked up to represent Zimbabwe at the forthcoming global sporting festival is training in the mountains of Nairobi with a number of Kenyan athletes who have also been chosen to represent their country.
Kenya has produced some of the world’s best middle and long distance athletes including world 800 metre record holder David Rudisha and athletics coach Elijah Tapa Tapa confirmed Tawengwa who will participate in the marathon is trying to follow proven practice.
‘She is in Nairobi and will be back in Zimbabwe in time for departure for the games,’ said Tapa Tapa. The last contingent of the Zimbabwe Olympic Games squad is leaving Harare this coming Sunday.
Tawengwa has been chosen along with seven others to represent Zimbabwe at the 2012 London Olympic Games which will run from July 27 to August 12.
Zimbabwe has never won an Olympic athletics medal since the country’s admission to international sport in 1980. The closest Zimbabwe came to doing that was at the 2008 Games In Beijing where long jumper Ngonidzashe Makusha missed out of medal by just a centimentre after finishing fourth just behind South Africa’s Khotso Mokoena.
Zimbabwe has won eight medals at the Olympic Games, seven of them by swimmer Kirsty Coventry while the other was won by the Zimbabwe women’s hockey team at the 1980 Games in Moscow.